YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, November 12
ကျောင်းသားလူငယ်များအပေါ်မတရား အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အကျယ်ကြည့်ရန်အစွန်ဆုံးမှလေးထောင့်ကွက်ကိုနှိပ်ပါ.....Statement for Students Judged by SPDC.pdf
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/12/20080အကြံပြုခြင်း
1990 Burmese Election(2)
Get your own at Scribd or explore others: US Federal Technology 2008 politics
Canada condemns crackdown in Myanmar
ကနေဒါနိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လော့ရင့် ကန်နွမ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချ နေပုံ
OTTAWA - Canada has called on Myanmar immediately release all political prisoners, including 14 given 65-year sentences Tuesday for their involvement in demonstrations last year against the ruling regime.
Foreign Affairs Minister Lawrence Cannon said Canada was "deeply concerned" about the imprisonment and called on the regime in Myanmar, formerly known as Burma, to beginadialogue with the democratic opposition in the country.
"Freedom, democracy, human rights and the rule of law are values fundamental to Canada's foreign policy. We call upon the Burmese regime to respect the human rights and fundamental freedoms of all the people of Burma," said Cannon, inastatement released late Tuesday. "We continue to urge the regime to beginagenuine dialogue with the democratic opposition and ethnic minorities in order to fosterapolitical process leading to the full restoration of democracy."
Foreign Affairs said the jailed were members of the 88 Generation Students group.
"Canada has shown its solidarity with the people of Burma by imposing the toughest sanctions in the world on its regime and by conferring honorary Canadian citizenship on Nobel Laureate Aung San Suu Kyi in recognition of her struggle to promote freedom and democracy in that country," said Cannon, in the statement.
Cannon also said that Canada was one of the first countries to respond to Cyclone Nargis, which struck Myanmar in May 2008, and has contributed more than $25 million to relief efforts there.
A total of 23 people arrested after last year's anti-junta demonstrations were handed prison sentences Tuesday and most were sent to Yangon's notorious Insein Prison, according to family friends andalawyer, Agence France-Presse reported.
New York-based Human Rights Watch called the trials "unfair," and said the detainees should not be punished for taking part in the peaceful protests in August and September of 2007, which were suppressed by the military.
အေးချမ်းမြေ့ | နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈
သတင်းကြားကြားချင်း အားလုံးက တောက်ခေါက်ကြသည်။ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သည် ဆိုသည့် စကားဖြင့် မလုံလောက် တော့၊ ဘယ်လို စကားလုံးမျိုးနှင့်မှလည်း ဖော်ပြရန် မစွမ်းတော့ကြောင်း ပြောဆို နေကြသည်။ အနှစ် ၂၀ ဆိုသည့် သတင်း က တောမီးပျံ့သလို တကမ္ဘာလုံးမှာရှိသည့် မြန်မာများထံကို မိနစ်ပိုင်း နာရီပိုင်းအတွင်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်တွင် အန္တရာယ်ရှိ အရက်ဖြူ သောက်သုံးသူဦးရေ မြင့်တက်
ကြည်ဝေ | နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈
ကထိန်လှည့်ရာတွင် ပဒေသာပင်များ ထမ်းလာကြသော လူငယ်လူရွယ်အများစုမှာ အရက်သောက်ထားကြသောကြောင့် ထမ်းလာသော ပဒေသာပင်များမှာ ရှေ့နောက် ယိမ်းထိုးလျက်ရှိသည်။
ပဒေသာပင် ထမ်းသူများသာမက ရှေ့ဆုံးမှ ငွေဖလား ကိုင်ပြီး အလှူခံသူ၊ အသံချဲ့ စက်တင်ထားသော ဆိုက်ကား တွန်းသူ၊ အသံချဲ့စက် မိုက်ကိုင်သူ စသဖြင့် ကထိန် လှည့်ရာတွင် ပါဝင်ကြသော ယောက်ျား ကြီးကြီးငယ်ငယ် အများစုတို့ အားလုံး အရက်သောက်ထားကြသည်။
“အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ လူငယ်တွေက ပဒေသာပင်တွေကျောင်းပို့ပြီး ကိစ္စ တွေအားလုံးပြီးမှ ကာလသားတွေစုပြီး သောက်ကြတာပဲ။ ခုတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ မနက်ကတည်းက မူးနေကြပြီ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ၁၀ ရပ်ကွက် တွင်းမှ သာရေးနာရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် ဓမ္မာရုံလူကြီးက ဆိုသည်။
၎င်းတို့ နေထိုင်သော ရပ်ကွက်အတွင်းတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၅၀ ကျော်၊ လူဦးရေပေါင်း ၅၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်၌ အရက်ဆိုင် ၁၃ ဆိုင်ရှိနေသည်။ အရက်ဖြူတပတ်လျှင် ကျပ် ၅၀ နှင့် ပေါပေါလောလော ရနိုင်ခြင်းကလည်း လူငယ်များကို အရက်သေစာ သောက်စားကြရန် တွန်းအားပေးလာသော အကြောင်းရင်းတရပ် ဖြစ်သည်ဟု ဓမ္မာရုံလူကြီးက သုံးသပ် ဝေဖန်သည်။
ယနေ့ခေတ် လူငယ်များအနေနှင့် သင်္ကြန်၊ နှစ်သစ်ကူးနေ့ကဲ့သို့သော ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပါသည့် နေ့များတွင်သာမက ဘာသာရေး နှင့် သက်ဆိုင်သော နေ့ရက်များတွင်ပါ အရက်သောက်သူ ပေါများလာပြီး အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းကို ဒုစရိုက်တပါး ဟုပင် သိပုံမရတော့ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“အရင်ခေတ်တုန်းက အရက်ဆိုင်ဆိုရင် တရပ်ကွက်လုံးမှာ တဆိုင်လောက်ပဲ ရှိတာ ခုတော့ခေတ်က ပြောင်းသွားပြီ။ အရက် ဆိုင်ဖွင့်မှ သူဌေးဖြစ်တယ်တဲ့။ အရက်ဆိုင်ဆိုတာ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ မှိုလိုပေါက်နေတော့တာပဲ ဟိုမှာ ဒီမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ တော့ဘူး” ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းတွင် နေထိုင်သူ တဦးက ပြောဆိုသည်။
အရက်ဆိုင်များတွင် အသက် ၂၀ ကျော် အရွယ်မှ အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ်အမျိုးသားများ ထိုင်လေ့ရှိပြီး အများစုမှာ စီးပွားရေး မပြေလည်မှုကြောင့် စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် လာသောက်နေ ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ စိတ်ပညာဌာနမှ ကထိက တဦးကဆိုသည်။
“အမျိုးသားတော်တော်များများက ပြဿနာတခုခုဖြစ်လာပြီး မဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် အဲဒါကို မေ့ပစ်ဖို့ အရက်မူးအောင် သောက်ပြီး အိပ်ပစ်လိုက်တာမျိုး၊ နေ့စဉ် ရက်ဆက် အရက်ချည်းသောက်နေတာမျိုး လုပ်ရင်းနဲ့ အရက်စွဲသွားကြတာ များတယ်” ဟု အဆိုပါ ကထိက ကဆိုသည်။
အလုပ်သဘောအရ ဧည့်ခံရသူများ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု လိုချင်သောကြောင့် လာသောက်ကြ သူများ၊ အလုပ်ပင်ပန်းသောကြောင့် သောက်ကြသူများထက် မပြေလည်၍ အရက်သောက်သူ ပိုများကြောင်း သူက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
“နောက်တခုက ခုခေတ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူထိုင်ဖို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေရဲ့ နှုန်းကမြင့်လာ တော့ မထိုင်နိုင်ကြတော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ငွေ ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောက်နဲ့ ထိုင်လို့ရတဲ့ အရက်ဆိုင်တွေထဲကို လူငယ်တွေ ရောက်လာ ကြတော့တာပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
လက်ရှိ လက်ဖက်ရည်တခွက် ဈေးနှုန်းမှာ ၂၅၀ ကျပ်၊ ၃၀၀ ကျပ် ဖြစ်နေပြီး အရက်ဖြူ တပက်လျှင် ၅၀ ကျပ်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တာထက် အရက်ဖြူ ဆိုင်ထိုင်တာက စီးပွားရေးအရ ပိုတွက်ခြေကိုက်သည်ဟု ယူဆလာကြတော့သည်။
ရွှေပြည်သာ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းထဲတွင် အရက်ဖြူဆိုင်ဖွင့်ထားသော အရက်ဆိုင်ရှင် တဦး ကလည်း ယနေ့ခေတ် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အရောင်းရဆုံး ကုန်ပစ္စည်းမှာ အရက် ဖြစ်ပြီး ငွေရင်းနည်း၍ အမြတ်များများကျန်သော ရောင်းကုန်မှာလည်း အရက်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“အရက်ရောင်းတာက အရင်းနည်းတဲ့အပြင် အမြတ်ငွေက ၄၊ ၅ ဆလောက်ကျန်တော့ အရက်ဆိုင်တွေ ပေါလာတော့ တာပေါ့” ဟု သူက ဆိုသည်။
လက်ရှိ ဈေးကွက်အတွင်း ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း အရက်ဆီ ၁ဂါလန်၏ တန်ဖိုးမှာ ကျပ် ၂၄၀၀ ဖြစ်ပြီး၊ အရက်ဆီ ၁ ပေပါ၏ တန်ဖိုး မှာ ကျပ် ၁ သိန်း ၂ သောင်းဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အရက်ဆီ ၁ ပုလင်းလျှင် ရေ ၄ ပုလင်းနှင့်ရောစပ်ရသောကြောင့် အရက်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် ရေရောပြီး အရက် ပုလင်းပေါင်း ၃၀ ထိ ထွက်လေ့ရှိသည်။
လက်ရှိ အရက်ဖြူ ၁ လုံး (၁ ပုလင်း) ၏ တန်ဖိုးမှာ ကျပ် ၅၀၀ ဈေးရှိသောကြောင့် အရက်တဂါလံလျှင် အနည်းဆုံး အမြတ်ငွေ ကျပ် ၁ သောင်းကျော် ကျန်သည်။ အရက်ဖြူကို အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀ ဖိုး၊ ၁၀၀ ဖိုးစသဖြင့် ရောင်းချပေးသည်။
ပြည်တွင်းဖြစ် ရမ်တလုံး၏ တန်ဖိုးမှာ ၂၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ၀ီစကီ တလုံး၏ တန်ဖိုးမှာ ၂၆၀၀ ကျပ် ဈေးရှိသည်။ အရက်ဆိုင် များတွင် ရမ်တပက်ကို ၂၅၀ ကျပ်၊ ၀ီစကီ တပက်လျှင် ၂၅၀ ကျပ်နှုန်းနှင့် ရောင်းခြင်းကြောင့် အရက်ဆိုင် လုပ်ငန်းမှာ အမြတ်များများကျန်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အရက်ဆိုင်တချို့သည် နှီးဖျားကို အင်ဒရင်း (အဆိပ်) ပုလင်းထဲသို့ စိုရုံ နှစ်၍ ပြန်ထုတ်ကာ အခြောက်ခံပြီး ခြောက် သွားသော နှီးဖျားကို မီးရှို့၍ ရလာသော ပြာကို အရက်အိုးထဲသို့ ထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုပြင်းသွားသည့် အဆိပ်ပါသော အရက်ကို အရက်ပြင်း ဟုဆိုကာ ရောင်းနေကြကြောင်း အနှစ် ၂၀ နီးပါး အရက်သောက်လာသူ တဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအနေနှင့် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက အရက်ချက် စက်ရုံ စုစုပေါင်း ၂၀ ကျော်ခန့်ရှိကြောင်း သိရှိရ သည်။ အဆိုပါ စက်ကြီးများမှာ တနေ့လျှင် အရက်ဆီ အနည်းဆုံး ဂါလံ ၁၀၀၀ မှ ဂါလံ ၅၀၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အစိုးရအနေနှင့် အရက်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်များကို စစ်ဗိုလ်မှူးဟောင်းများ၊ တာဝန် ထမ်း ဆောင်နေသော ၀န်ကြီးများနှင့် ပတ်သက်သူများကို ချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ရှိတွင် ထိုအရက်ချက် စက်ရုံကြီးများမှ အရက်ဆီထုတ်လုပ်မှု နှုန်းမှာ တနေ့လျှင် ဂါလံ ၆ သောင်း နှင့် အထက် ရှိပြီး အရက်ဆီ ဂါလံ ၆ သောင်းတွင် သောက်သုံး၍ရသည့်အဆင့် အရက်ဖြူ ဂါလံပေါင်း ၂ သိန်း ၄သောင်းကျော် ထွက်လျက်ရှိ ကြောင်း စက်မှု(၁) ၀န်းကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောပြသည်။
တခြားသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင်လည်း လိုင်စင်မဲ့ အရက် ချက်လုပ်နေသူများ ရှိနေပြီး ၎င်းတို့၏ အရက်ထုတ်လုပ်မှု နှုန်းမှာ တနေ့လျှင် ဂါလံပေါင်း ၁ ထောင်နှင့်အထက် ရှိနိုင် ကြောင်း စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ခန့်မှန်းပြော ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသည်းခြောက်ပြီး သေဆုံးသည့်နှုန်းမှာ တနှစ်ထက်တနှစ် မြင့်တက် လာသည်ကို တွေ့မြင်ရပြီး အသည်း ခြောက်သူများ၏ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အရက်ကြောင့် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း အသည်း အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး တဦးက ပြောဆိုသည်။
နည်းစနစ်တကျ ထုတ်လုပ် ထားခြင်းမဟုတ်သော အရက်များကို သုံးစွဲနေသူများ၊ တနေ့ကို အရက်တပုလင်းမှ ၂ ပုလင်း ကြား ပုံမှန်သောက်တတ် နေသူများသည် သက်ဆိုး မရှည်နိုင်ဘဲ ၃ နှစ်မှ ၄ နှစ်အတွင်း အသည်းခြောက် သေဆုံးတတ် ကြောင်း အဆိုပါ ဆရာဝန်က ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရက် ဈေးကွက်တွင် ပြည်တွင်းဖြစ် အရက်ဖြူကို အနံ့နှင့်အရောင် ထည့်သွင်းကာ နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်များ အဖြစ် အတုပြုလုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိနေသော နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်များ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြည်တွင်း ၌ပင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အရက်ချက် လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောပြသည်။
အရက်ဆိုင်ကြီးတဆိုင်တွင် အရောင်းဝန်ထမ်းလုပ်နေသူ တဦးကလည်း ၎င်းတို့ထံမှ သုံးပြီးသား နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်ပုလင်း ခွံများကို ပုံမှန်လာကောက်သူများရှိနေပြီး ပုလင်းခွံ၏ တန်ဖိုးမှာ အရက်အမျိုးအစားနှင့် ပုလင်းခွံရှားပါးမှုအလိုက် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ထိ ဈေးပေးဝယ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
ထို့ပြင် ပြည်တွင်းဖြစ် ကုန်ကြမ်းအစစ် အမှန်နှင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ပြည်တွင်းဖြစ် ၀ီစကီနှင့်ရမ် ရှားပါးလာပြီဖြစ်ကြောင်း အရက်ချက်စက်ရုံတခုမှ ဓာတုဗေဒ အင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်များသာမက ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော ၀ီစကီနှင့် ရမ်တို့ သည်လည်း အတုများဖြစ်နေတတ် ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယစ်မျိုးလိုင်စင်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကိုင်ဆောင်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
အရက်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်များမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှိကာ အရက်ဖြူဆိုင် ထိုင်သောက် ရောင်းချ ခွင့် လိုင်စင်ကြေးမှာ ၁ နှစ် လျှင် ကျပ် ၁ သိန်း၊ ဘီယာဆိုင်ထိုင်သောက် ရောင်းချခွင့် လိုင်စင် မှာ ၁ နှစ်လျှင် ကျပ် ၅ သိန်း ဖြစ်ပြီး အနီ (ရမ်နှင့် ၀ီစကီ) ဆိုင်ထိုင်သောက် ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်မှာမူ ကျပ် ၁၂ သိန်းဖြစ်သည်။ အရက်ဆိုင်အများစုမှာ အဖြူရောင်းချခွင့် လိုင်စင်သာ တင်ထားသော်လည်း တခြားသော အနီ၊ ဘီယာစသဖြင့် တွဲရောင်းကြသည်။
ထို့ပြင် စတိုးဆိုင်များတွင် အရက်တင်ရောင်းမည်ဆိုပါက အရက် အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်း မှ ကျပ် ၁၂ သိန်းထိ လိုင်စင်ကြေးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အရက်ချက်စက်ရုံ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းများ မှာလည်း စက်ရုံအကြီးအသေး ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ၁ နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးကျပ် ၁၂ သိန်း၊ ဒုတိယ တန်းစား ကျပ် ၂၄ သိန်းနှင့် အများဆုံးကျပ် ၃၆ သိန်းထိ ရှိကြောင်း အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် အရက်ချက်စက်ရုံ တည်ထောင်ခွင့်ကို ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၀ တွင် ပုဂ္ဂလိကသို့ စတင်ချပေးခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် ပိတ်သွားခဲ့သော်လည်း အရက်ချက် လုပ်ငန်းများမှာ တရားမ၀င်သောနည်းလမ်းများဖြင့် တောနယ် များတွင် ယနေ့ထက်တိုင် ဆက်လက်တိုးပွား လျက်ရှိကြောင်း မြင်တွေ့နေရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ သတင်း
စစ်အစိုးရက လူပေါင်း ၄၀ ခန့်ကို ယနေ့ ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်
ဧရာဝတီ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားသော တောင်ဥက္ကလာ ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်မှ သံဃာတော် ၅ ပါး အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများ၊ တသီးပုဂ္ဂလ လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူများ စသည့် လူပေါင်း ၄၀ ခန့်ကို ယနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် အမြင့်ဆုံး ၆၅ နှစ် အထိချမှတ်လိုက်သည်။
ငွေကြာယံ ကျောင်းတိုက်မှ သံဃာ ၅ ပါးကို ထောင် ၆ နှစ်ခွဲစီချမှတ်လိုက်ပြီး ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုအံ့ဘွယ် ကျော်၊ ကိုပဏ္ဍိတ်ထွန်း၊ မနီလာသိန်းနှင့် မမီးမီးတို့အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ၁၄ ဦး ကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် စီ ချမှတ်လိုက်သည်ဟု မိသားစုဝင်များ နှင့် ဥပဒေ အကျိုးဆောင်များက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့မှ ကိုပြည့်ဖြိုးလှိုင်နှင့် ၉ ဦးကိုလည်း ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အထိ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးအား ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ၆ လ ချမှတ်လိုက်ကြောင်းလည်း ၎င်း၏ အစ်မဖြစ်သူ မဌေးဌေးကြည်ကပြောသည်။ မစုစုနွေးနှင့်အတူ ကိုဘိုဘိုလှိုင်ဝင်းသည် ထောင် ၈ နှစ် ချမှတ်ခံရကြောင်းလည်း သိရသည်။
ရွှေသံစဉ်ကို ၀င်းမော်အား ထောင် ၇ နှစ်၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာရှင်များကို ကူညီနေသူ ကိုသန်းနိုင်တို့ကိုလည်း ထောင် ၆ နှစ်စီ ချမှတ် လိုက်သည်။
တခြားသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ၁၄ ဦးကိုလည်း လာမည့်ကြာသပတေးနေ့ ရုံးထုတ်မတိုင်မီ ထောင်ဒဏ်ချ မှတ်ရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း၊ ကျန်ဖမ်းဆီးထားသည့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူအားလုံးကို နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် ၀န်းကျင် တွင် ပြစ်ဒဏ်များ စီရင်နိုင်ကြောင်းလည်း အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ အသိုင်းအ၀န်းက သိရသည်။
“အာဏာပိုင်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကတည်းက နိုဝင်ဘာ လကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ပြစ်ဒဏ်စီရင်တာတွေ အပြီးဖြတ် မယ်လို့ ကြားနေရတယ်၊ ဇေယျာသော်အမှုကိုလည်း ၂၀ ရက်လောက်မှာ ဖြတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အဆိုတော် ဇေယျာသော်၏ ရှေ့နေ ဦးအောင်ကြီးက ပြောဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြစ်ဒဏ်များ စီရင်လိုက်ခြင်းကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ကြွေးကြော်တုံ့ပြန်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း လည်း သိရသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုမင်းဇေယျက“၆၅ နှစ်ထဲပါ”ဟု ပြောဆိုလိုက်ပြီး မမီးမီးကမူ “ဘယ်တော့မှ မကြောက်ဘူး”ဟု ကြွေးကြော်ကာ တခြားသော သူများက“မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး” ဟု ကြွေးကြော် ခဲ့ကြကြောင်း ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သူများက ပြောပြသည်။
ပြီးခဲ့သော အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက တရား စီရင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၈ ဖြင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုပြုံးချို ၊ ကိုမြအေး၊ ကိုလှမျိုးနောင် ၊ ကိုအောင်သူ ၊ ကိုဥာဏ်လင်းနှင့် ကိုမျိုးအောင်တို့ ၉ ဦး ကို အာဏာပိုင်များက ထောင်ဒဏ် ၆ လစီ ချမှတ်လိုက်ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မအူပင်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချို၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဝင်းမောင်က အဆိုပါ ၉ ဦးကိုလည်း ကြီးလေး သည့် ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ဧရာဝတီ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈
မွန်ပြည်နယ် သထုံ မြို့နယ်ရှိ အစိုးရစာသင်ကျောင်းပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင် သင်ကြားနေသည့် မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သင်ခန်းစာကဏ္ဍကို ရပ်နားလိုက်ကြောင်း မွန်အမျိုးသားပညာရေးဌာနက ပြောသည်။
၎င်းမွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု သင်ခန်းစာကဏ္ဍကို ယခင် အစိုးရစာသင်ကျောင်းချိန်အတွင်း သင်ခွင့်ရရှိ ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းအာဏာပိုင်များ၏ အစီအစဉ်အပြောင်းအလဲများကြောင့် ကျောင်းသားများ မတက်နိုင်တော့သည့် အတွက် ဇွန်လက ရပ်နားလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ လက်အောက်ရှိ မွန်အမျိုးသားပညာရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
“ကျောင်းသားတွေမတက်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ သူတို့ကျောင်းစာသင်ချိန်အပြင် အချိန်ပိုတွေကိုပါ တက်နေရတယ်၊ နေ့တိုင်းဆိုတော့ ကျောင်းသားအများစုက မွန်စာပေကို သင်ဖို့စိတ်မဝင်းစားတော့ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် သင်ခန်းစာသင်ကြား ရေးကို ရပ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို အစိုးရကျောင်းချိန်တွင် ပြန်လည်သင်ကြားခွင့်ရရန် ကြိုးစား တင်ပြသော်လည်း အထက် အမိန့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရပ်နားလိုက်သည့်အတွက် သထုံခရိုင်ရှိ မှုလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်း ပေါင်း ၃၀ တွင် ပညာသင်ကြားနေ သည့် ကျောင်းသားစုစုပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့် မွန်စာပေသင်ကြားခွင့် မရတော့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ ကျောင်းဆရာမတဦးဖြစ်သူ မိဟန်သာက “အခုလို မွန်စာပေသင်ကြားခွင့် မရတော့တဲ့ ကျောင်းတွေလို လက်ရှိ အခြားသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတွေကပါ အပိတ်ခံရမှာကို စိုးရိမ်နေကြ တယ်” ဟု ပြောသည်။
မွန်အမျိုးသားပညာရေးဌာန၏ စာရင်းပြုစုချက်အရ မွန်ပြည်နယ်တွင် ၎င်းတို့ ဖွင့်လှစ်ထားသော မွန်စာပေ သင်ကြားနေသည့် ကျောင်းပေါင်း ၁၅၂ကျောင်းရှိပြီး မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကျောင်း ပေါင်း ၁၁၄ ကျောင်း ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ယင်း မွန်တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုစာပေ သင်ကြားခွင့်ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရ နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးယူခဲ့ပြီးနောက် နားလည်မှုလက်မှတ် ရေထိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည်အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရပြုလုပ်သည့် ပထမပိုင်း အမျိုးသားညီလာခံကို ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် လေ့လာသူ အဖြစ်သာတက် ရောက်ခဲ့ သည်။ ၎င်းနောက်တွင် စစ်အစိုးရ နှင့် နိုင်ငံရေး တင်းမာမှုရှိလာသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မွန်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ နိုင်ဆန်ထောန်က “သူတို့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား မှာတော့ တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စာပေတွေကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ် ဆိုတာတွေပြနေပေမယ့်လည်း အမှန်မှာတော့ သူတို့ပြောတာ တခြား လုပ်တာတခြားစီ ပါပဲ၊ အမှန်တော့ တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စာပေတိုးတက်ခွင့်ကိုပါ ဖိနှိပ်ထားတာ ပါ” ဟု ပြောသည်။
မွန်စာပေသမိုင်းကြောင်းအရ မွန်စာအက္ခရာသည် အန္ဒိယ ရှေးဟောင်း ဗြဟ္မဏ အက္ခရာမှ ဆင်းသက်လာကာ မြန်မာ အက္ခရာ အပါအဝင် ထိုင်း၊ ခမာ၊ လော စာပေ အက္ခရာများ၏ အခြေခံအက္ခရာ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွန်စကား ပြောသည့် လူဦးရေ ခန့်မှန်းခြေ ၇သိန်းကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ရန် တင်ပြမည်
ဧရာဝတီ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြုလုပ်မည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၌ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၄၃ နိုင်ငံက ဆန္ဒပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထဲမှ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ နော်ဝေး၊ အီတလီ၊ အစ္စရေး၊ ဂျာမနီ၊ ကနေဒါ၊ သြစတေးလျ အစရှိသည့်နိုင်ငံများက ယင်းကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန် ဆန္ဒပြုအစီအစဉ်ကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရ အနေနှင့် ၂၀၁၀ တွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုရှိရန်၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးတို့ကို အပြည့်အ၀ လေးစားလိုက်နာရန် စသည့် တိုက်တွန်းချက်များ ပါဝင်မည့် ဆုံးဖြတ် ချက်များချမှတ်ရန်ကို အထွေထွေညီလာခံမတိုင်မီ အဆိုပါ နိုင်ငံများအတွင်း ဆွေးနွေး၍ ညီလာခံသို့ တင်သွင်းမည် ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးချက်များ၌နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေသည်မှာ ၁၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အပါအ၀င် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်များလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အထွေထွေညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရအား ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အပြည့်အ၀ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုချက်များ ပါရှိရန်လည်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအပေါ် ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှုများပြုလုပ်နေခြင်းကို ရုပ်သိမ်းရန်၊ သတင်းဌာနများနှင့် သတင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ကိုင် သူများကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန်တို့ကိုလည်း အထွေထွေညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ထည့်သွင်း ဆုံးဖြတ်ရန်တို့ ပါရှိသည်။
ယင်းအထွေထွေညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြုလုပ်ရန်၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ အားဖမ်းဆီးနေခြင်း များကို အမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းရန် အစရှိသည့် စစ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းချက်များချမှတ်ရန် တို့လည်း ပါရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတွင်းရှိ ကမ်းလွန် သဘောဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက် (၇) ခုကို
The Financial Express/ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
ပုဂ္ဂလိကလက်လွှဲပြောင်းရေးမှ ပိုလျှံဝန်ထမ်းပြဿနာကို စစ်အစိုးရတာဝန်မယူ
NEJ/ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနနှင့် အကျိုးတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို စာရင်းဖျက်သိမ်း နေသည့်အလျောက် စက်မှု (၁) လက်အောက်ရှိ စီးကရက်စက်ရုံအားလုံးကို စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်က ယူမည်ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်မှ ရန်ကုန် စီးကရက်စက်ရုံအမှတ် (၁) ကို စတင်ယူတော့ မည်ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်အရာရှိက ပြောသည်။ စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနလက် အောက်တွင် ဗာဂျီးနီးယားလုပ်ငန်းရှိတော့မှာ မဟုတ်သဖြင့် ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းအနေ ဖြင့် ပိုလျှံဝန်ထမ်းများကို မည်သည့်နေရာ ထားရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်ဟု ဦးအောင်သောင်း၏ လက်ထောက်အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“ခုဖြစ်နေတာက ပုဂ္ဂလိကလက်လွှဲပြောင်းရေးဆိုတာကို အစိုးရက ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ လုပ်နေ တယ်။ အစိုးရ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံတွေ ပုဂ္ဂလိကလက်ရောင်းပြီဆိုရင် အစိုးရခန့်တဲ့ ၀န်ထမ်း အကုန်မယူဘူး။ အရည်အချင်းမီတဲ့သူပဲရွေးခေါ်မှာ။ ဒီတော့ ၀န်ထမ်းပိုလျှံမှုဖြစ်လာမယ်။ ပိုလျှံဝန်ထမ်းတွေအတွက် ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့ Social Welfare စနစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူး။ ရှိရင်တောင် ဒီဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက ပိုလျှံဝန်ထမ်းတွေထောက်ပံ့ဖို့ ဘယ်ကရငွေနဲ့ Social Welfare စနစ်ကို ကျားကန်မလဲ။ ဒါတွေကို စစ်အစိုးရ၀န်ကြီးတွေ တွေးမိသလား မပြောနိုင်ဘူး။ ထင်ရာလုပ်နေတဲ့ပုံစဲပဲ” ဟု သတ္တုတွင်းအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
လယ်ဆည်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ ပျဉ်းမနားသကြားစက်ဆိုလျှင် ယုဇနကုမ္ပဏီမှ ၀ယ်သွားသည်မှာ (၂) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၀ယ်စဉ်က ပါသွားသည့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို (၅) နှစ်ထိသာ တာဝန်ယူမည်၊ (၅) နှစ်ကျော်လျှင် အလုပ်မပေးနိုင်ဟု ယုဇနကုမ္ပဏီက ပြောထား သည့်အတွက် ၀န်ထမ်းများ အခက်တွေ့နေသည်ဟု ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
အရှုံးပေါ်နေသည့် စစ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများအား ထောက်ပံ့ရသည့်ပမာဏမှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှု၏ (၄၀) ရာနှုန်းနီးပါးရှိသည်ဟု ၂၀၀၅ ခုနှစ် အေဒီဘီအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း (၂,၀၀၀) နီးပါးရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကို ၁၉၉၅ ခုမှစတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကလက်လွှဲပြောင်းရေး စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်ထိ ပုဂ္ဂလိကလက်လွှဲပြောင်းခဲ့သည့် ၀န်ကြီးဌာန (၁၈) ခုမှ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းပေါင်း (၁၈၀) ရှိသည်ဟု စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြင့်မိုးဇော် / ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
ဒီကေဘီအေ (၃၃၃) တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကို ကေအန်ယူဝင်သိမ်း
ဒီကေဘီအေ (၃) ဦးကျဆုံး၊ ကေအန်ယူ (၃) ဦး ဒဏ်ရာရ
NEJ/ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
အဲမန္တလေးလေယာဉ် နေပြည်တော်တွင် အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့ရ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 12 2008 19:30 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ အဲမန္တလေး လေယာဉ်တစီး ပျံသန်းနေစဉ် မသင်္ကာဖွယ် မီးခိုးနံ့များ ရသဖြင့် နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့ရသည်။
အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်မှုများ ထားရှိရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 12 2008 19:28 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ဒါကာ။ ။ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုများကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာ အစ်ဖ်တက်ကာ အာမက် ချောင်ဒရီ နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြို့တော်တွင် တွေ့ဆုံကာ ဤသို့ အဆင့်မြင့် အဆက်အသွယ်များ ဆက်လက်ထားရှိရန် နှစ်ဘက် သဘောတူညီခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
"မြန်မာ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အဓိက အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး နယူးဒေလီမြို့ကို ရောက်ရှိတဲ့အခါ တွေ့ဆုံမှု အပါအဝင် အဆင့်မြင့် အဆက်အသွယ်များ ဆက်လက် ထားရှိဘို့ ကျနော်တို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်" ဟု 'ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် ဘက်စုံနည်းပညာနှင့် စီးပွါးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်' (BIMSTEC) ၏ အစည်းအဝေးပြင်ပ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အပြီးတွင် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က မီဒီယာများသို့ ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ဤနှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျယ်ပြန့်လှသည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မကြာခင်က ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များနှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး နယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသော ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ဒါကာမြို့တွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်သော သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို “လှိုက်လှဲပျူငှါရှိသော” ဆွေးနွေးပွဲဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
"အစည်းအဝေးက ပွင့်လင်းပြီး လှိုက်လှဲပျူငှါ ရှိပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရှိတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ အငြင်းပွါးမှုများကို တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သွားကြဘို့ ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ ရင်းနှီးတဲ့ အိမ်နီးချင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွါးရေးနယ်ပယ်တွေမှာ ဆက်လက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ တန်ဘိုးတွေကိုလဲ မြင်တွေ့နေကြပါတယ်" ဟု ဒေါက်တာ ချောင်ဒရီက ပြောသည်။
"မကြာခင်က ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို လာရောက် လည်ပတ်စဉ်အတွင်း အလွန် အသုံးတည့်လှတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေအပေါ် အခြေခံတဲ့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်စရာ ကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ဘို့ လိုပါတယ်" ဟုလည်း သူက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
BIMSTEC သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ နီပေါ နှင့် ဘူတန် နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည့် ဒေသတွင်း အုပ်စုတခုဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်၏ အရှေ့နှင့် အနောက်ကို ဆက်သွယ် ပေါင်းကူးပေးနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ခြင်း ခံရပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေး ပါရဂူများ၏ အမြင်အရ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင်း တည်ရှိနေသည့် ပထဝီဝင် အနေအထားကို ကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်ပါက ဤအုပ်စုဝင် နိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းလာနိုင်သည့် အလားအလာ ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 12 2008 16:27 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်သဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဘိုကလေး၊ ပုသိမ်နှင့် မြောင်းမြမြို့သား ၉ ဦးအား အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးတခုမှ ယမန်နေ့က ထောင်ဒဏ် ၂၄ နှစ် အပါအ၀င် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
အငြင်းပွားနေတဲ့ ရေပိုင်နက်ကိစ္စ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ မြန်မာ နှစ်ဖက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများဆွေးနွေး
မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရှ် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီကနေ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ တိတိကျကျ ရလဒ်ကို မသိရသေးပေမယ့်လို့။ ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကနေ နှစ်ဖက်ပြဿနာကို အဖြေထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်ကတော့ မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသားညွန့်ဦးက ပြောပြမှာပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ BIMSTEC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ကျင်းပရာ အပြင်ပန်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dr. Iftekhar Ahmed Chowdhury နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့နှစ်ဦး တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ အငြင်းပွားနေတဲ့ ရေပိုင်နက်ပြဿနာအပေါ် နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေအကြား တွေ့ဆုံဖြေရှင်းဖို့ မူလကတည်းက အစီအစဉ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အခု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦး ဒီကနေ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဌာန အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ် မိုဟာမက် အမ်ရင်က ဗီအိုအေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ကြမယ်။ ကျနော်တို့ဖက်က နိုင်ငံခြားရေးဌာန အကြံပေးအရာရှိချုပ်နဲ့ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ အခု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးကတော့ နယူးဒေလီမှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီလို့ သိထားပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ ကျနော်သိထားသမျှတော့ တင်းမာမှုအခြေအနေက လျော့သွားပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။”
အခုလို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦး တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှ နိုင်ငံခြားရေးဌာနကလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်အကြား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုးရိုးသားသား နွေးထွေးချစ်ကြည်စွာနဲ့ နှစ်နိုင်ငံအငြင်းပွားနေတဲ့ ရေပိုင်နက်ကိစ္စအပြင် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလားအလာတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ဒီကြေညာမှာ ဆိုထားပါတယ်။ နှစ်ဖက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တာနဲ့အညီ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာ အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးသွားကြဖို့ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ဆန္ဒရှိကြတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ချောင်ဒရေ ပြောဆိုပါတယ်။
မကြာခင်လည်း နယူးဒေလီကိုရောက်လာမယ့် မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှဖက်က အကြီးတန်းအကြံပေးအရာရှိချုပ်တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးကြဖို့လည်း သဘောတူထားပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အငြင်းပွားနေတဲ့ ရေပိုင်နက်မှာ စစ်သင်္ဘောတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ မြန်မာ ကုန်ချင်းဆက် နယ်စပ်တလျှောက်မှာတော့ နှစ်ဖက်တပ်တွေ အပြန်အလှန်တိုးမြင့်ချထားတယ်လို့ နယ်စပ်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတော့ ဒါဟာ စစ်ရေးအရပါ ပြင်နေကြတဲ့ သဘောလားလို့ ယူဆစရာရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရှ နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိကတော့ သံတမန်ရေးဆွေးနွေးမှုကနေ အဖြေထွက်လာမယ်လို့ သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ သံတမန်ရေးလမ်းကြောင်းကနေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုတွေကနေ အဖြေတခုခု ရလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။”
ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှနဲ့ မြန်မာနယ်စပ်ဟာ ကီလိုမီတာ ၃၂၀ အရှည်ရှိပြီး နတ်မြစ်နဲ့ နယ်နမိတ်ကို ပိုင်းခြားထားတာပါ။ အခု အငြင်းပွားနေတဲ့ ရေပိုင်နက်ကိုတော့ မြန်မာဖက်က ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာ နှစ်ဖက် အပြန်အလှန်တင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုင်နက်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့တော့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၆နဲ့ ၁၇ ဒါကာမြို့မှာ နှစ်ဖက် နည်းပညာဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုကိစ္စ အဖြေတစုံတရာထွက်လာပြီလို့ မကြားရသေးပါဘူး။
နိုဝင်ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၀၈
အမေရိကန်စစ်ပြန်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် သမ္မတဘုရှ် တက်ရောက်ဂုဏ်ပြု
မနေ့က အင်္ဂါနေ့မှာ နှစ် ၉၀ ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ပထမကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးသွားခြင်း အထိမ်းအမှတ်
အခမ်းအနားတွေကို နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ
လည်း သမ္မတဘုရ်ှက စစ်အတွင်းမှာ အနစ်နာခံအသက်စွန့်သွားကြသူတွေကို ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ပေါ်လာ ၀ုဖ်ဆင်
(Paula Wolfson) သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ပထမကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ကို ဥရောပနဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာ
စစ်ပြေငြိမ်းတဲ့နေ့၊ ဒါမှမဟုတ် အောက်မေ့ဖွယ်နေ့လို့ သတ်မှတ်ပြီး အထိမ်းအမှတ်
အခမ်းအနားတွေကို ကျင်းပကြပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ ဒီနေ့ကို
၁၉၁၈၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ကစပြီး သတ်မှတ်လာခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ရောက်တိုင်း အမေ
ရိကန်မှာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကနေ ဒီနေ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူ အားလုံး
အတွက် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုပွဲတွေကို ကျင်းပပါတယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်
ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အာလင်တန် (Arlington) အမျိုးသားစစ်သင်္ချိုင်းမှာ
သမ္မတက လွမ်းသူ့ပန်းခွေ ချလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ နိုင်ငံရဲ့ စစ်သေနာပတိချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ သမ္မတဘုရ်ှက သူ့ရဲ့ သမ္မတ
တာဝန်နဲ့ နောက်ဆုံးတက်ရောက်တဲ့ စစ်ပြန်များနေ့ကို နယူးယောက်ခ်မြို့မှာ သွားတက်
ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘောအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး
အခုအခါမှာတော့ ရေပေါ်ပြတိုက်လုပ်ထားတဲ့ USS Intrepid စစ်သင်္ဘောဟောင်းကြီး
ပေါ်မှာ သမ္မတက အခုလို မိန့်ခွန်းစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
"စစ်မှုထမ်းခဲ့ကြသူအားလုံးကို သူတို့ရဲ့ အနစ်နာခံမှုအတွက် ကျနော်တို့က ကျေးဇူးတင်
တယ်ဆိုတာ ဒီနေ့မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောလိုက်ပါရစေ။ တိုင်းပြည်အတွက် အလို
အပ်ဆုံးအချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကို ရင်ဆိုင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ
အခုလို သမ္မတဘုရှ် နယူးယောက်ခ်မှာ စစ်ပြန်များနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်နေ
စဉ်မှာ ဒုတိယသမ္မတ ဒစ်ခ်ချေနီ (Dick Cheney) ကတော့ အာလင်တန် အမျိုးသား
စစ်သင်္ချိုင်းကို သွားရောက်ပြီး စစ်အတွင်း ကျဆုံးသူများအတွက် လွမ်းသူ့ပန်းခွေ ချခဲ့ပါ
တယ်။ ဒုတိယသမ္မတ ချေနီ မိန့်ခွန်းစကား ပြောကြားတဲ့အခါ မျက်မှောက်ကာလ
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ စစ်မှုထမ်းတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပိုမို
လုံခြုံတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်အောင် သူတို့ရဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေကို အဓိကထားပြီး ပြောကြား
"အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ လွတ်လပ်ရေး အဓွန့်ရှည် အောင်မြင်နေတာဟာ
လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလကစပြီး ဒီနေ့အထိ အမေရိကန် လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ
မှာ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ သတိရှိရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ အမေရိကန်တွေ ရှိနေလို့ပဲ
အမေရိကန် ဒုတိယသမ္မတ ဒစ်ခ်ချေနီ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ စစ်သင်္ချိုင်းတွေမှာလည်း စစ်ပြန်များနေ့ အထိမ်း
အမှတ် အခမ်းအနားတွေကို အင်္ဂါနေ့တုန်းက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ချီကာဂိုမြို့က
စစ်သင်္ချိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားမှာ သမ္မတသစ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံထားရသူ
မစ္စတာ ဘရက်ခ် အိုဘားမား (Mr. Barack Obama) တက်ရောက်ပြီး လွမ်းသူ့ပန်းခွေ
တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်
ခဲ့ကြသူ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကို အမေရိကန်လူမျိုးတွေက တညီတညွတ်တည်း
ဂုဏ်ပြုနေကြပါတယ်လို့ မစ္စတာအိုဘားမား ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြ
ထားပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ စစ်သေနာပတိချုပ် ဖြစ်လာတဲ့အခါကြရင်လည်း စစ်မှုတာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူ အားလုံးအပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေ ဆက်ပြီး
ရှိသွားကြစေဖို့ သူဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ မစ္စတာအိုဘားမားက ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင်းက ထောင်တွင်းတရားရုံးက ဖမ်းဆီး
ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေကို စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီး အများစု
ဟာ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်စီ ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို စီရင်ချက်ချခံခဲ့ရတဲ့
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ၁၄ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အထဲက မနီလာသိန်းဟာ သူတို့
အထဲကပဲ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရတဲ့ ကိုဂျင်မီရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီး မနှစ်က ကိုဂျင်မီကို
လာရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်မှာ ၄ လအရွယ် သမီးကလေးကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး တိမ်းရှောင်နေခဲ့
ရာက ဒီနှစ်ထဲမှာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုစီရင်ချက်ချမှတ်ခံရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ
အတွင်းမှာ လောင်စာဆီဈေးနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးတို့အတွက် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒ
ပြကြတာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး တနှစ်ကျော်ကြာပြီးနောက် အမှုကို စတင်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ဓနသဟာယ ၀န်ကြီးရုံးက အခုလို ၈၈ မျိုးဆက်
ကျောင်းသားတွေအပေါ် ကြီးလေးတဲ့ထောင်ဒဏ် ချမှတ်တာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်
ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ ကြေညာချက် မနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ထောင်ဒဏ်
နှစ်ရှည်တွေ ချမှတ်ခြင်းခံကြရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကို
ထုတ်ဖော်ပြသတာကလွဲလို့ ဘာမှမဟုတ်မမှန်တာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်သလို
မြန်မာနိုင်ငံ ကောင်းမွန်တိုးတက်ရေးအတွက် အခြားသူတွေနဲ့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်
လိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြမှုကို အစဉ်အမြဲ ထုတ်ဖော်ပြသနေသူတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ဓနသဟာယ၀န်ကြီး ဘေးလ်ရာမဲ (Bill Rammell) က ပြောဆို
အခုလို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်တာဟာ ဆိုးရွား
နေတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကို ကောင်းမွန်တိုးတက်အောင်၊
နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက် ဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးများလာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့တွေ
အတွက် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေမှာ စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာ ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့
လန်ဒန်အခြေစိုက် Amnesty International ခေါ် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်
အဖွဲ့ကြီးရဲ့ တာဝန်ရှိသူ ဘန်ဂျမင် ဇာဝက်ကီး (Benjamin Zawacki) က မနေ့က